क–कस्ले लगाउन हुँदैन कोरोनाविरुद्धको खोप ? « Janata Samachar
काठमाडौं । नेपालमा बुधबारदेखि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइँदैछ । बुधबार शहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पातालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीलाई पहिलो खोप लगाएर नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन शुरु गरिँदै छ ।
पहिलो चरणमा यो खोप फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, शववाहन चालक, चिकित्सक र सरसफाईकर्मीलाई नि शुल्क लगाउने सरकारको तयारी छ । यस्तै वृद्धाश्रम र कैदीखानामा पनि पहिलो चरणमा नै खोप लगाउने सरकारको योजना छ ।
तर यो खोप सबैले लगाउन भने मिल्दैन । अहिले प्रयोग गर्न लागिएको खोप गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका, तुरुन्त गर्भवती हुने योजना भएका महिलाले लिन नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै यस खोपको पहिलो मात्रा लगाउँदा एलर्जी भएकाहरूले पनि दोस्रो मात्र लिनु हुँदैन । यसका साथै १८ वर्ष मुनिका बालबालिकामा यो खोपको अनुसन्धान भइरहेकोले हाललाई यो समूहलाई खोप सिफारिश गरिएको छैन ।
तर मुटु रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या, मधुमेह, शिकलसेल एनिमियाजस्ता स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूले यो खोप लिनु झनै आवश्यक छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण भएमा यस्ता स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू बिरामी हुने सम्भावना बढी भएकाले पनि उनीहरूले यो खोप लिन जरुरी छ ।
विश्वभर ९ करोड ६ लाख संक्रमणमुक्त, २५ लाख ४९ हजारको मृत्यु
काठमाडौं । विश्वभरमा नौं करोड ६ लाखभन्दा बढी कोरोना भाइरसका बिरामी निको भएका छन् ।
विश्वभर ९ करोड २ लाख संक्रमणमुक्त, २५ लाख ४२ हजारको मृत्यु
काठमाडौं । विश्वभरमा नौं करोड दुई लाखभन्दा बढी कोरोना भाइरसका बिरामी निको भएका छन् ।
विश्वभर ८ करोड ९९ लाख संक्रमणमुक्त, २५ लाख ३६ हजारको मृत्यु
काठमाडौं । विश्वभरमा आठ करोड ९९ लाखभन्दा बढी कोरोना भाइरसका बिरामी निको भएका छन् ।
नेपालमा थप ८१ जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि
ताप्लेजुङको दोभान बजारमा लागेको आगलागी अझै नियन्त्रणमा आएन